ငွေအတိုးစားသူများအကြောင်း – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on August 31, 2009October 12, 2009 by kyawkyawoo	Posted in UncategorizedTagged ဂျူးလူမျို, ရဟူဒီ ရှိုင်း လော့, ရီဘာ, အစ်စ္စလမ်ဘာသာ, အနောက်နိုင်ငံမှဘဏ်ကြီးများ, ငွေတိုးစားခြင်း, ငွေအတိုးစားသူများအကြောင်း, လောင်းကစား ခြင်း, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, islam, islamic banking, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion	အစ္စလမ်ဘာသာက ရီဘာ လို့ခေါ်တဲ့ ငွေတိုးစားခြင်း
မှ ငွေတိုးစား ခွင့်မရှိတဲ့အပြင် speculation လို့ခေါ်တဲ့ လောင်းကစား
ခြင်းလို လုပ်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းမရှိပဲ ငွေအမြောက်အများရယူခြင်း
လွန်ခဲ့တဲ့လက ရုရှားမှာ ကာစီနိုအကုန် ပိတ်ပြစ် ခဲ့ လို့လူပေါင်း
ငါးသောင်း လောက်အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူ
များက လောင်းကစားမှူ ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များဖြစ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှူ ပိုများ
လာခြင်း၊ စီးပွါးပျက် ဒေဝါလီခံ ရသူတွေ များလာပြီး လူ့အသိုင်းအဝိုင်း
အတွက် မကောင်းတဲ့ အတွက်ပိတ် ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ကမာ့္ဘ မှာ Islamic Banking လို့ခေါ်တဲ့အစ်စ္စလမ်
နှစ်စဉ် ၁၀ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုံးနဲ့ တိုးတက်နေပြီးနိုင်ငံ
ပေါင်း၅၁ ခု( အမေရိကန်) အပါအဝင်မှာ အမေရိကန်
ဒေါ်လာ ဘီလျံငါးရာ ကျော်တဲ့ လုပ်ငန်း ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။
ကမာ့္ဘ တခုလုံးက စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့လေ့လာကြ
ပြီး အောင်မြင်တဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအသစ်အဖြစ် လက်ခံနေကြပါပြီ။
Islamic Banking မှာဝင်ပြီးလုပ်ကိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
လေထဲမှာ တကဲ့ ပစ္စည်းမရှိပဲလုပ်တဲ့စတော့ ရှယ်ယာ ဈေးကွက်
ပျက်ရတဲ့ အတွက် Islamic Model ကို စီးပွါးရေးပညာရှင်များက
ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကအတိုင်း အတိုး
၁၇ရာစုက ရော့ချိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဂျူးမိသားစုက အတိုးစား
တဲ့လုပ်ငန်းကို ဒီနေကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးလို့ခေါ်တဲ့ ဂျူးထိန်းချုပ်
အရင်တုန်းကတော့ဂျူး ငွေရှင်တွေဟာတပိုင်တနိုင် ငွေတိုး
ချေးစားသူတွေပါ။ ချစ်တီးက အဘခေါ်လောက်အောင် ဆိုး
လွန်းလို့ ရှိတ်စပီးယား ရဲ့ ဗင်းနစ်မြို့မှကုန်သည်ကြီး ဝထ္ထုမှာ
ရဟူဒီ ရှိုင်း လော့ဟာ အသားကို လှီးဖြတ်ယူမဲ့ သူအဖြစ်ရေး
ရော့ချိုင်းမိသားစုက ၁၇ ရာစုမှာ ငွေချေးရင်
ကြာကြာ ချေးထားလေလေ အတိုးများများရလေ
ဒီနေ့ ငွေချေးပြီးနက်ဖန်ပြန်ဆပ်မဲ့ သူကိုငွေချေး
တာအကျိုးမရှိ ပဲ လူများများကို အချိန်ကြာကြာ
ချေးထား ရင် အတိုးများများရတာကို သဘောပေါက်
ခဲ့ပါတယ်။ အကြွေးမဆပ် နိုင်သူတွေရဲ့လယ်ယာ အိမ်
မြေ သိမ်းယူလို့ ရတယ်ဆိုတာကို လဲ ဂျူးတွေကပဲစခဲ့
နောက်ပိုင်း ရော့ချိုင်းမိသားစုဟာပို ကြွယ်ဝလာတဲ့အခါ
လူတွေကိုငွေချေးမဲ့အစား နိုင်ငံလိုက် ငွေချေးတာကအကျိုး
ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင် ဒါမှမဟုတ်အစိုးရတရပ်ကိုငွေချေးရင်
အကျိုးအမြတ်ပိုများသော်လဲ တကယ် လို့ ဒီနိုင်ငံ က ချေးငွေ
ပြန်မဆပ် ရင်ဘယ်လိုငွေပြန်ရအောင်လုပ်ရမလဲ လို့ ဦးဏှောတ်
အဲဒီအချိန်က ဝါးတားလူး လို့ ခေါ်တဲ့ စစ်ပွဲ အတွက် အင်္ဂလိပ် နဲ့
ပြင်သစ် တို့ စစ်ပြင်နေတဲ့အချိန်ပါ။
5 thoughts on “ငွေအတိုးစားသူများအကြောင်း”	September 1, 2009 at 2:50 pm	Thant Sin says:
ဆက်လက်ရေးသားနိုင်တဲ့စွမ်းအား အလ္လာဟို့အရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှချီးမျှင့်ပါစေလို့ ဒိုအာပြုလိုက်ပါတယ်… (အာမီးန်)
September 2, 2009 at 2:33 am	kyawkyawoo says:
Ko Thant Sin
Thank you for yr feed back. Insha Allah, i will continue the post.
Pingback: ငွေတိုးစားသူများအကြောင်း (၂) « Kyaw Kyaw Oo’s Words of Love September 2, 2010 at 3:55 pm	Ma Mei says:
Visited. Thanks for this post. I am looking for part 2.
September 3, 2010 at 2:36 am	kyawkyawoo says:
Salam Ma Mei,
Insha Allah, I will continue it after Aidul Fitri. Please read my latest post ” Are natural disasters wrath of Allah?” I want your comment.
Big Bang and Origin of Life from Holy QuranRamadan 2009 Photo Essay